Global Voices teny Malagasy » Maraoka: Mpianatra Nogadraina Fa Nanevateva Ny Mpanjaka Tao Anatina Lahatsary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Febroary 2012 11:31 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Maraoka, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Tamin'ny Alatsinainy 13 Febroary teo, niampanga ilay mpianatra, Abdelsamad Haydour 24 taona higadra 3 taona an-tranomaizina sy handoa lamandy 1200 dolara amerikana ny fitsarana ao an-tanànan'i Maraoka ao Taza noho ny fitsikerana nataony tamin'ny mpanjakan'i Maraoka tamina lahatsary  navoakany tao amin'ny YouTube. Araka ny fanambarana ofisialy navoakan'ny sampam-pahalalam-baovaon'ny fanjakana , voampanga ho “nanosihosy ny hasin'ny firenena” i Haydour.
Araka ny voalazan'ny tranokalam-baovao ao Maraoka , tsy nanana mpisolo vava Andriamatoa Haydour nandritra ny fakana ambavany azy ary tsy nanendry mpisolo vava ho azy ihany koa ny fitsarana mba hiaro ny voampanga ho fanajana ny lalàna Maraokana. Araka ny lalàna maraokana, tsy azo ‘tsinontsinoavina’ ny mpanjaka. Ny lalampanorenana maraokana ao amin'ny (andininy 23) kosa anefa dia manome antoka ny ” fahalalahana ara-tsaina, ara-kevitra ary fahalalahana haneho hevitra amin'ny endriny rehetra.”
Nivoaka tany am-piandohan'ny volana Janoary tany ilay lahatsary  naharitra efatra minitra niampangana azy, nandritra ny herinandro nisian'ny rotaka ara-tsosialy sy ny fifandonana  feno herisetra teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy misahana ny rotaka tao an-tanàna anjakan'ny tsy fananan'asa tao Taza.
Ao anatin'ilay lahatsary, hita miresaka amina vondron'olona eny an-dalana i Abdelsamad Haydour, mitsikera mafy ny mpanjaka sy ny olona akaiky azy (lahatsary navoakan'ny zawali66 ):
Tonga ny mpanjaka raha tsy mbola feno ny herinandro nanatrehana  olona iray feno 18 taona ny Fitsarana tao an-drenivohitra Rabat voampanga ho nanevateva azy tamin'ny fandefasany sary sy lahatsary maneso ny mpanjaka Mohammed VI.
@Basta : eritreritra fotsiny ihany: ao #Morocco tsy mampigadra ny manevateva an'Andriamanitra, mampigadra kosa ny manevateva ny mpanjaka, gadra 3 taona; misy fehin-kevitra ve? #HR #ArabSpring
@Charquaouia : Hatramin'izay nisian'ny lalampanorenana sy fifidianana izay, tsy voaisako intsony ny olona nogadraina tao Maraoka noho ny fanehoan'izy ireo hevitra tokana fotsiny ihany.
@Burrito_SB : Olona firy no tokony hosamborina noho ny fanehoan-kevitra kely mba ataony, mila fantarintsika ve fa tsy nisy fiovana ao #morocco #maroc
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/02/18/28991/
 sampam-pahalalam-baovaon'ny fanjakana: http://www.map.ma/fr/actualites/general/taza-trois-ans-de-prison-ferme-pour-un-individu-poursuivi-datteinte-aux-valeurs-s
 tranokalam-baovao ao Maraoka: http://www.bladi.net/abdessamad-haydour-insulte-roi.html